Zororo - Bezzia | Bezzia
El zororo chero chiitiko chakatsaurwa nevanhu kwavari free time. Naizvozvo, isu tinoda kuratidzira zvinonakidza zvikuru zvikumbiro zvevakadzi kuti vafare, vatandare uye vawane zvinyorwa zvedu zvichibatsira. Mavari, zviitiko zvetsika zvichaitika: mafirimu, mabhuku, kuratidzira kana kuridzwa kwemimhanzi izvo zvinofarira vaverengi vedu.
Uye zvakare, pachave nenzvimbo yezvimwe zviitiko senge mapato mumaguta akasiyana eSpanish kana iyo famba, chiitiko chinonakidza kune chero munhu.
Zvakare iyo kutarisa kuchave kwevakadzi, ichisimbisa iwo manakiro uye zvinodiwa nevakadzi, asi kutariswa kuchakweverwa kune izvo zvirongwa zvinogona kuitwa semhuri. Nekudaro, iwe unozogona kuwona mafirimu evana vedu, kuratidzira kwekudzidzisa, zviitiko zvemanyore zvinogona kuitwa semhuri kana nzendo dzakakurudzirwa dzenharaunda yemhuri.
6 epanyama masisitimu ekushanyira munaNovember
Chero nguva yegore yakanaka kushanyira iyo yakasarudzika enclaves yatinofunga nhasi, asi izvi zvinowana mashiripiti ...
Matipi ekupinda mutsika yekuverenga uye kuinakidzwa
Kuwa inguva yakakosha kune avo vedu vanofarira kuverenga. Kana mamiriro ekunze asingakukoke kuti uite zviitiko ...
Kuwa kunounza nekapasi tembiricha asi zvakadaro zvinonakidza kunakidzwa nekunze zviitiko. Kwete nekuti…
Ceramics, iyo yemafashoni hobby
Makore mashoma apfuura kufarira kwevatengesi vechinyakare kwakakura, izvi zvichiwanazve basa ravakange varasa. Kufarira uku kwaive ...
Mahoridhe pamba: makiyi uye zvirongwa zvekuita kuti zvishande
2021 harisi gore riri nyore. Izvo zvinorambidzwa uye kusagadzikana kwehupfumi kwakatorwa kubva padenda iri kutimanikidza ...
Iye zvino sezvo mamiriro ekunze akanaka apedzisira asvika, inguva yekunyatso shandisa zhizha. Sei? Kunakidzwa nezvirongwa ...
7 Marilyn Monroe Makotesheni Anokudzidzisa Nezve Hupenyu
Marilyn Monroe akadzivirira zvaaifunga uye akararama hupenyu hwakazara nekukwira nekudzika asi zvakare azere nezvidzidzo izvo nhasi ...
Kudonha zvinwiwa kugadzira kumba
Autumn iri kutsika netsoka dzedu uye kana iwe uchida zvinwiwa mukambani yakanaka kana kugadzirira kumisangano yako ...
Nei shamwari dzako dzichigara dzichikosha kupfuura mudiwa
Kunyangwe chii chinoitika muhupenyu, iwe unogona kugara uchivimba iro boka reshamwari dzakanakisa ku ...
Maitiro akanaka ekunakidzwa nekushanyirwa kwechisikigo
kubudikidza Maria vazquez inoita 1 gore .
Munguva yezhizha, mafambiro kune zvakasikwa inova imwe nzira yakanaka yekuchaja mapapu edu nemhepo ...
kubudikidza Diana Millan inoita 1 gore .
Kwenguva yakati ikozvino, spas iri kuwedzera. Utano hwekushanya huri kuwedzera zvakanyanya ...